“” သူငယ်ချင်းလည်း အမုန်းဆွဲ “” – Grab Love Story
“သူ” ဆိုတာက မောင်မောင်ဦး ပါ။ “သူတို့” ဆိုတာက မောင်မောင်ဦးနဲ့ သိင်္ဂီမော် တို့လင်မယား။ ကျွန်မကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ငယ် သူငယ်ချင်း။ နေရာကမြန်မာရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲ ကျင်းပနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပက တစ်နေရာ။ ဒီကိုလာရင်း မောင်မောင်ဦးနဲ့ စုံမိတယ်။ သူတို့လင်မယားနဲ့ မတွေ့ဖြစ်တာ ခြောက်လလောက်ရှိပြီ။
သူကလည်း တစ်ယောက်တည်း။ နင့်မိန်းမရော လို့ မေးတော့ သူ့ယောက္ခမ နေမကောင်းလို့ မြန်မာပြည်ပြန်နေတာ လေးလလောက်ရှိပြီ လို့ ဖြေတယ်။ အခု သူတို့အိမ်မှာ သူတစ်ယောက်တည်းပေါ့။ သူတို့အိမ်က အိမ်ဆိုတာထက် ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းလို့ လို့ပြောရမှာပါ။
ဒီအခန်းကို ကျွန်မ မကြာခဏ ရောက်ဖူးတယ်။ ပွဲတစ်ခုခုရှိလျှင် လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံးက ဖိတ်တာကိုး။ ဒီမြို့မှာ လည်း ငယ်သူငယ်ချင်းအရင်းဆိုလို့ သူတို့လင်မယားနဲ့ ကျွန်မ နှစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သူတို့တိုက်အောက်မှာ ဘာဘီကျူး လုပ်စားကြ ရင်းရေကူးကြတယ်။
စားသောက်ပြီး ညနေစောင်းမှ ပဲ ပြန်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ခြောက်လ တောက်လျောက် သိင်္ဂီ နဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ဖုန်းပြောဖြစ်တာကလွဲလို့ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ သူမြန်မာပြည် ခဏပြန်သွား တာလည်း မသိလိုက်ဘူးလေ။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့အိမ်ကို ကျွန်မလိုက်သွားလိုက်တယ်။ ကွန်ဒိုနားရောက်တော့ လုံခြုံရေးဂိတ်ကို ဖြတ်ရမှာပါလား ဆိုတာ တွေးမိလိုက်တယ်။ သိင်္ဂီမရှိတဲ့ အချိန် သူ့ယောက်ျားတစ်ယောက်တည်း နေတဲ့အခန်းကို ကျွန်မလာသွားတယ် ဆိုပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်က သတင်းပေးလိုက်မှဖြင့် လို့ တွေးမိတယ်။
မသင့်လျော်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် မောင်မောင်ဦး ကအရှေ့ မိန်းဝင်ပေါက်ကနေ မဝင်ဘဲ ကွန်ဒိုကို အနောက်ဘက် လူဝင်ပေါက်ကိုခေါ်သွားတယ်။ ဒီဝင်ပေါက်ရှိမှန်း ကျွန်မ အမှတ်တမဲ့ပါပဲ။ ကျွန်မလာတိုင်း အသွားအပြန် ဘစ်စကားမှတ်တိုင် နဲ့မလှမ်းမကမ်းတင်ပါပဲ။ ကျွန်မစိတ်ထဲ မြင်တဲ့သူမရှိလို့ တော်ပါသေးရဲ့လို့ တွေးမိလိုက်တယ်။ အရှ့ဘက်က ဆိုရင် လုံခြုံရေးဂိတ်ပေါက်ကို ကြိမ်းသေဖြတ်ရမှာပါ။
တစ်ကိုယ်လုံးကို စိုစွတ်သွားအောင် ပွတ်သပ်ပြီး ရေချိုးရင်း ဆပ်ပြာတိုက်ဖို့ ကြည့်လိုက်တော့ စင်ပေါ်မှာ စီရရီတင်ထားတဲ့ ယောက်ျားသုံး နဲ့ မိန်းမသုံး ကိုယ်တိုက် ဆပ်ပြာရည်ဗူးနှစ်ဗူး နဲ့ မိန်းကလေး သန့်စင်ရည်ပုလင်းလေး တစ်ခုကိုတွေ့တယ်။ အတော့ကို ကျစ်လျစ်တဲ့ သေသပ်တဲ့ သိင်္ဂီပဲလို့ တွေးမိပြီး ပြုံးလိုက်မိတယ်။
သူ့ဆပ်ပြာပဲ ယူတိုက်ရတော့မှာပဲလေ။ ဆပ်ပြာယူပြီး လက်နှစ်ဘက်ကို ပွတ်တိုက် နောက်လည်ပင်း။ ဒီကမှ ရင်ဘတ်နဲ့ ရင်သားတွေကို ဆက်တိုက်လိုက်တယ်။ လက်က နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်တိုက်မိတော့ ရုတ်တရက် ကြက်သီးဖြန်းခနဲဖြစ်သွားပြီး ရင်သားကတင်းမာသွားတယ်။ အသာလေး ကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့နှစ်ခုက တောင့်တောင့်လေးတွေ ဖြစ်နေပြီလေ။
ကျွန်မက အိမ်ထောင်ကျဖူးသူ တစ်ယောက်ပါ။ မုဆိုးမ တစ်ယောက်လို့ ဆိုရင်ပိုတိကျပါမယ်။ မောင်နဲ့ ကျွန်မ အိမ်ထောင်သက် သုံးနှစ်အတွင်းမှာ သားသမီးမယူခဲ့ကြဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာ မိသားစု တစ်ခု တည်ထောင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရင်းအနှီးကို အလုပ်လုပ်ရင်း အရင်ဆုံး ရှာကြမယ်ပေါ့။
ပြီးမှ အိမ်လေးတစ်လုံး ဝယ်မယ်၊ သားသမီးယူမယ်၊ ပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုတစ်ခု တည်ဆောက်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ရည်မှန်းချက် မပြည့်ခဲ့ပါဘူး။ ကားမတော်တဆ မှု့တစ်ခုနဲ့ “မောင်” ရုတ်တရက် ဆုံးသွားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်ကပေါ့။ မောင့် ကို ကျွန်မ ချစ်ပါတယ်။ သိပ်လည်း သတိရတယ်။ ပြီးတော့ မောင့်ရဲ့ အထိအတွေ့ကိုလည်း အမှတ်ရတယ်။
ဒါပေမယ် အိမ်ထောင်ထပ်ပြုဖို့ ဆိုတာကို ကျွန်မ မတွေးခဲ့ဘူး။ ပတ်သက်ဆက်နွယ်လာမယ့် အခြေအနေတွေကို မလိုချင်တော့တာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် သွေးနဲ့ကိုယ် သားနဲ့ကိုယ် ဖြစ်တဲ့အပြင် အိမ်ထောင် မှု့ အရသာကို ရယူ ခဲ့ဖူးသူ အရွယ်ကောင်း တစ်ယောက် ဆိုတော့ သွေးသား စိတ်ဆန္ဒ ကရှိတာပဲပေ့ါ။ တစ်ကိုယ်ရည်ဖြေသိမ့် မှု့တွေဟာ တကယ်တော့ မပြီးပြည့်စုံပါဘူး။
တင်းမာလာတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေဟာ ကျွန်မရဲ့သွေးသားဆန္ဒ တောင်းဆိုနေတယ် ဆိုတာ သိနေတယ်။ အခုမှ သူတို့ လင်မယားရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ပထမဆုံးရောက်ဖူးတာပါ။ ဒီရေချိုးခန်းထဲကိုရောပေါ့။ အခန်းထဲ ဝင်လိုက်ကတည်းက သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိတဲ့ နှစ်ယောက်အိပ် အိပ်ယာ ရယ် အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ စီစီ ရီရီ တင်ထားတဲ့ အလှပြင်မှန်တင်ခုံရယ်ကို မြင်ကတည်းက ကျွန်မစိတ် ထဲ တစ်မျိုးနေ တယ်လို့ ထင်မိသား။
လင်နဲ့ မယား နှစ်ယောက် သားအတွက် ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်ဆိုတဲ့ အသိက ခေါင်းထည်း ရောက်လာတာကြောင့် ထင်ပါရဲ့။ အခုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတာ ကိုသိလိုက်ပြီ။ ရင်သားတွေကို ညှစ်လိုက် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ဖိလိုက် ပွတ်လိုက်နဲ့ အသာသာဖြေနေမိတယ်။
ခန္ဓာ ကိုယ်ပေါ်ကို တတောက်တောက် ကျနေတဲ့ ရေမှုန်ရေမွှား လေးတွေကလည်း အားပေးနေသလိုပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကမှ ဖယောင်းကပ် ထားတဲ့ အတွက် မိန်းမကိုယ်က ဟာတာတာ ဖြစ်နေတယ်။ မျက်လုံးကိုမှိတ် ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဟာတာတာ ဖြစ်နေတဲ့ အဲ့ဒိ နေရာကို လက်နဲ့ ပွတ်နေ လိုက်မိတယ်။
ရုတ်တရက် ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိရလိုက်မိပြီး ထရပ်လိုက်မိတယ်။ ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာ ဖြစ်ပြီး မောဟိုက်နေသလိုပဲ။ ရေမြန်မြန်ပြီးအောင်ချိုးပြီး ပြန်မှဖြစ်မှာပါ လို့တွေးလိုက်တယ်။ ကျွန်မအတွက် တစ်ကိုယ် ရည်အာသာ ဖြေခြင်းဟာ အလေ့အကျင့် တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါပြီ။
အခုလို အချိန်မှာ လွတ်လပ်တိတ် ဆိတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်ခန်းကိုပဲ တမ်းတလိုက်မိတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာ ခပ်မြန်မြန် တိုက်လိုက်တယ်။ ရေချိုးပြီးလို့ ရေသုတ်မယ် လုပ်မှ ခုဏက အပေါ့သွားရင်း သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ရသေးတာကို သတိရလိုက်မိတယ်။
ဒါနဲ့ စင်ကလေး ပေါ်မှာ အသင့် ရှိနေတဲ့ သန့်စင်ဆေးရည်ကိုပဲ သုံးပြီး တစ်လက်စတည်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုက်တယ်။ ဗူးတွေကို သူ့မူလ အနေအထား အတိုင်း ပုံမပျက်အောင် ပြန်တင်ထားလိုက်တယ်။
ရေစိုနေတဲ့ အဝတ်တွေကို အသင့်ပါလာတဲ့ ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲထည့် ပြီး ပါလာတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ထုတ်ဝတ်လိုက်တယ်။ ပါလာတဲ့ တဘက်နဲ့ ရေစင်အောင်သုတ်၊ ရေစိုနေတဲ့ ဆံပင်တွေကို ခြောက်အောင် dryer ခပ်သွက်သွက် မှုတ်လိုက်ပြီး မိတ်ကပ် အနည်းငယ်လိမ်းပြီး နှုတ်ခမ်းနီ စိုးလိုက်တယ်။
နောက်ကိုယ့် ပစ္စည်း စစ္စယ တွေကို ကျောပိုးအိတ်ထဲ ပြန်ထည့်ပြီး အခန်းအပြင်ထွက်လာတော့ မောင်မောင်ဦးက ထမင်းစားခန်းစားပွဲမှာ ထိုင်နေတယ်။ သူ့ရှေ့မှာတော့ ဝိုင်နီ တစ်ပုလင်း။
“ဟဲ့ … လာ.. နွေးသွားအောင် နဲနဲ သောက်လိုက်” ။
သူက ဖန်ခွက်အလွတ် တစ်ခုထည်း ဝိုင်အနည်းငယ် ငှဲ့ထည့်ရင်း ကျွန်မကို လှမ်းခေါ်တယ်။ ဒါနဲ့ သူနဲ့ ထောင့်ချိုးက ကုလားထိုင်မှာ ဝင်ထိုင်ပြီး တစ်ငုံစီ သောက်လိုကတော့လူကနွေးကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ အရင်ကတည်းက ရေကူးပြီးတိုင်း ကျွန်မတို့သုံးယောက် သောက်နေကျလေ။
“နင်က ငယ်ငယ်က အတိုင်းပဲ .. “
ဆိုပြီး သူက ပြောလိုက်ပြီးတော့ သူက ကျွန်မ ကိုစေ့စေ့ကြည့်နေတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းထဲမှာ ရီရီဝေဝေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို တမ်းတနေတယ်လို့ ထင်လိုက်မိတာပဲ။ ကျွန်မစိတ်ထဲလည်း အခုလို အကြည့်ခံရတာကို ရှက်ရွံ့ မိတယ်။
“အသက်က မငယ်တော့ပါဘူးဟာ နောက်နှစ်လ လောက်ဆို သုံးဆယ် ပြည့်ပြီ…. ” လို့ ပြောလိုက်တော့ သူက တစ်စုံတစ်ရာ ပြောမယ့်ဟန် ပြုပြီးမှ သက်ပြင်းချလိုက်ပြီး ဝိုင် ကိုပဲ တစ်ကြိုက်ချင်း သောက်နေတယ်။
စိတ်ထဲမှာ သူတို့လင်မယား အဆင်မပြေဖြစ်နေသလားလို့ တွေးလိုက်မိပြီး .. “နင်တို့ လင်မယေား အဆင်ပြရဲံလား .. “ လို့ မေးလိုက်ယ်။
“ပြေပါတယ်ဟ… “ လို့ပြန်ဖြေတယ်။
ပြီးတော့ ဆက်ပြီး “ဝေးနေတာ လနဲ့ချီနေပြီပေါ့ လွမ်းတာပေါ့.. ဟ.. ဟ “ လို့ ပြောတယ်။
ခေါင်းထဲမှာ သိင်္ဂီ ပြောတဲ့ စကား တစ်ခွန်း က ရုတ်တရက် ရောက်လာတယ်။ သူတို့ကို သားသမီး မယူဘူးလားလို့ မေးတုန်းက ပြောခဲ့တာ။ တစ်ရက်ခြား တစ်ခါလောက် လင်မယား အတူနေကြတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပေါ့။ ကျွန်မက သားသမီးယူချင်ရင် မျိုးဥကြွေတဲ့ အချိန် မှာ အတူနေရတယ်ဆိုပြီး တော့တောင် ဆရာလုပ်ခဲ့သေးတယ်။
ဒီကောင် သူ့မိန်းမနဲ့ အတူမနေရလို့ ငတ်နေပြီလို့ စိတ်ထဲ တွေးလိုက်မိတယ်။
ဒါနဲ့ “ ငါသိပါတယ် နင့်မိန်းမကို လွမ်းတာထက် မအိပ်ရတာကို ပိုလွမ်းတယ် မဟုတ်လား.. .. နင်တို့ ယောက်ျားတွေကလေ .. “ လို့ ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်။
အဲ့ဒိ စကားဟာ ပိတ်ထားတဲ့ သော့ပေါက်ကို ဖွင့်လိုက်မိမယ်မှန်း ကျွန်မ မသိလိုက်ခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ မောင်မောင်ဦးနဲ့ ကျွန်မတို့ ကြားက ဆက်ဆံရေးက သာမာန် ငယ်သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ အနေအထားထက် အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးပါတယ်။
“ဟဲ့ ငဦး၊ နင် ခဏ နေအုံး ငါရေချိုးလိုက်အုံးမယ်” လို့ စာသင်စားပွဲ ဝိုင်းမှာ ငုတ်တုတ်လေး ထိုင်နေတဲ့ မောင်မောင်ဦးကို ပြောလိုက်တယ်။
ကျွန်မတို့ အိမ်မှာ ဝိုင်းကျူရှင်လုပ် တယ်လေ။ နေ့လယ်ပိုင်း သင်္ချာ ပြီးသွားပြီး ညနေပိုင်း ရူပကို ဆက်သင်ရမှာ။ နှစ်ဝိုင်းစလုံးကို တက်တာ ကျွန်မနဲ့ မောင်မောင်ဦးပဲ ရှိတဲ့ အတွက် သင်္ချာ အချိန်ပြီးသွားလို့ အခြားသူတွေပြန်သွားရင် သူနဲ့ ကျွန်မနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့လေ့ ရှိတယ်။ အဖေနဲ့ အမေရော ဈေးဆိုင်ထွက်နေကြတယ်။
အစ်မက ကတော့ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်နေချိန်ပေါ့။ အဖေနဲ့ အမေကလည်း ဈေးက ဆိုင်မှာ။ ပြီးတော့ သူနဲ့ ကျွန်မတို့က မူလတန်းကတည်းက ကျောင်းအတူတူ တက်ခဲ့ ကြတဲ့ ပြောမနာ ဆိုမနာ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ။ ကျူရှင်ချိန် နှစ်ခု ကြား တစ်နာရီလောက် ကြာတဲ့ အချိန် မှာ သူက အဲ့ဒိစားပွဲမှာပဲ မပျင်းမရိထိုင်ပြီး စာဖတ်နေတတ်တယ်။ ကျွန်မက အဲ့ဒိအချိန်မှာ ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားလဲ လေ့ရှိတယ်။
ရေချိုးပြီးလို့ သနပ်ခါးလိမ်းနေတုန်း အိမ်ရှေ့က နေ “ဟာ မီးပြတ်သွားပြီဟ … ” လို့ မောင်မောင်ဦး က လှမ်းအော်တာ ကြားလိုက်တယ်။ အခန်းထဲမှာ မီးလင်းနေဆဲမို့ အိမ်ရှေ့က မိးချောင်းလွတ်သွား ပြန်ပြီ ဆိုတာသိလိုက်တယ်။
အဲ့ဒိလို ဖြစ်တိုင်း အဖေက မီးချောင်းဘေးက စတတ်တာလေးကို လှည့်လိုက် နဖားလေးတွေကို ဖိလိုက်လုပ်ပြီး ပြန်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတတ်တယ်။ အဖေ မီးချောင်းကို ပြင်တာကြည့်ပြီး ကျွန်မတို့လည်း ပြင်တတ် နေပြီလေ။ မီးချောင်းက အမြင့်ကြီးမှာ ချိတ်ထားတာ မဟုတ်တော့ စာပွဲပေါ် တက်ပြီး ခြေဖျား ထောက်လိုက်တာနဲ့ မီတာကိုး။
သူ့ရှေ့တင် စားပွဲပေါ်က စာအုပ်တွေကိုရှင်း၊ ကုလားထိုင်ပေါ်တက်၊ နောက် စားပွဲပေါ် အသာတက်၊ ခြေဖျားထောက်ပြီး စတတ်တာကို အသာလေး လှည့်လိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ စတတ်တာမှာ မီးလေး တစ်ချက်နှစ်ချက် ပွင့်သွားပြီး မီးချောင်းကလည်း ဖြတ်ခနဲ ပြန်လင်းလာတယ်။
အဲ့ဒိအချိန်မှာ ပဲ ခြေဖျားထောက် လက်ကိုဆန့်ပြီး မီးချောင်းကို ကိုင်နေတဲ့အတွက်ထင်ပါရဲ့ ရင်ဘတ်မှာစည်းထားတဲ့ ထမီအထက်ဆင်က ချောင်ချိ သွားသလို ဖြစ်သွား တာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ ချက်ချင်းပဲ ပြေလျော့နေတဲ့ အထက်ဆင်ကို ကျွန်မလက်နဲ့ ဖမ်းအုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ နောက်ကျ သွားတယ်လေ။
လက်က ရင်ဘတ်အပေါ် ပိုင်းကိုအုပ်လိုက်မိတဲ့ အချိန်မှာ ထမီက ခြေရင်းမှာ ကွင်းလုံးကျွတ်ရောက်သွားပါပြီ။ မသိစိတ်ကြောင့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အုပ်မိအောင် လက်ကို ပြင်လိုက်မိပေမယ့် ကျွန်မ ဆီးစပ်က အကာအကွယ်မဲ့ သူ့မျက်နှာရှေ့မှာ။ အံ့အားသင့်နေတဲ့ သူမျက်နှာနဲ့ ပြူးနေတဲ့ သူ့မျက်လုံးအစုံ ကို မှတ်မှတ်ရရ မြင်လိုက်ရတယ်။
သတိပြန်ဝင်လာပြီး ကျွန်မလည်း ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ထမီကို ကောက်စွပ်လိုက်ပြီး အခန်းထဲ ပြေးဝင် လိုက်တယ်။ စားပွဲပေါ်ကနေ ခုန်ဆင်းလိုက်သလား ဘယ်လိုဆင်းလိုက်သလဲ ကျွန်မ မမှတ်မိတော့ဘူး။ စားပွဲတွေ ခုံတွေက ဟန်ချက်ပျက်သွားတဲ့ အတွက် ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း အသံထွက်သွားပြီး စာအုပ်တွေလည်း ကြမ်းပေါ် ကျကုန်တယ်။
သူ့ကတော့ ဘယ်လိုကျန်ရစ်ခဲသလဲ မသိပေမယ့် ကျွန်ကတော့ ရှက်လွန်းလို့ သေမတတ်ပါပဲ။ ခဏနေတော့ အခြေားကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာ ရောက်လာတယ်။ သူက ပုံစံပျက်သွားတဲ့ စားပွဲနဲ့ စာအုပ်တွေကို နေသားတကျ ပြန်ပြင်ထားတာ တွေ့ရတယ်။
ကျွန်မလည်း ဟန်မပျက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိနေ့က စာထဲ စိတ်ကို မဝင်စားသလို့ သူ့မျက်နှာကိုလည်း စေ့စေ့ မကြည့်ရဲဘူး။ အဲ့ဒိနေ့ညက အိပ်မပျော်ဘူး။ သူများတွေကို သူလျောက်ပြောရင် အရမ်းရှက်စရာ ကောင်းမှာပဲ ဆိုပြီးတော့။
နောက်ရက်တွေ မှာတော့သူက ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲ ပုံမှန် နင် ငါ ပြောဟယ် ဆိုရယ်ပဲ။ သူရော ကျွန်မရော အဲ့ဒိနေ့က အကြောင်းကို စကားမစ ကြပါဘူး။ သူ့ပုံစံကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မစိတ်ချ လိုက်မိတယ်။ စာမေးပွဲ ဖြေခါနီးတော့ သူ့အဖေက နယ်ပြောင်းရတယ်။
သူတို့လည်း လိုက်သွား ကြရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့်သူက စာမေးပွဲပြီးတဲ့ အထိ သူ့ အဖွားအိမ်မှာပဲ နေခဲ့မယ်လို့ ပြောတယ်။ စာမေးပွဲဖြေပြီးပြီးချင်း နောက်တစ်နေ့ ပဲ လိုက်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ နီးလာတဲ့ အတွက် ကျွန်မတို့လည်းစာကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်ရတာပေါ့။ တစ်ရက် သင်္ချာ အချိန်ပြီးလို့ ခါတိုင်းလို သူနဲ့ ကျွန်မနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့ချိန်ပေ့ါ။ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မရေချိုး အဝတ်အစားလဲ ပြီး အိမ်ရှေ့သွားထိုင်ပြီးစကား ပြောကြတယ်။
ရုတ်တရက် စကားစ ပြတ်သွားပီး ခဏနေတော့ သူက .. “ဟဲ့ ငါနင့်ကို တစ်ခုပြောစရာ ရှိတယ်ဟ… နင်စိတ်မဆိုးနဲ့.. “ ဆိုပြီးပြောတယ်လေ။
ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ပြောလိုက်တဲ့ သူ့စကားကြောင့် ကျွန်မရုတ်တရက် ရင်ထဲလှိုက်ဖို သွားမိတာ အမှန်ပါ။ ယောက်ျေားလေးတွေဟာ ဒီလိုစကားစပြီးရင် မိန်းကလေးတွေကို ချစ်ရေး ဆိုကြတယ်ဆိုတာ မြင်ဖူး ကြားဖူးတာကိုး။ သူများ ကျွန်မကို ချစ်ရေးဆိုလေမလားပေါ့။ အကြာင်းသိ ငယ်ပေါင်းဖြစ်နေတာ့ သူ့ကို ချစ်လို့ ကြိုက်လို့ရမယ် မထင်မိပါဘူး။
ဒါနဲ့ပဲ “ပြောလေ… “ လို့ ပြောလိုက်တော့ သူက ကျွန်မအနား ကပ်လာတယ်။
ပြီးတော့ “နင့်ဟာကို ကြည့်ချင်သေးတယ်ဟာ.. ငါ့ကိုပြပါလား.. “ တဲ့။
သူဘာကို ဆိုလိုမှန်း ကျွန်မ နားမလည်လိုက်ဘူး။ “ဘာလဲ.. “ လို့ ပြန်မေးတော့ သူက.. “ဟို … နင့်စောက်ပတ်လေဟာ… ငါကြည့်ချင်လို့…. ပြပါလား.. “ တဲ့။
ကျွန်မ အံ့လည်း အံ့သြ စိတ်လဲတို ရှက်လည်းရှက်ပေါ့။ “စောက်ကောင်… “ ဆိုပြီး ဆဲလိုက်မိတယ်။
“ငါလူကြီးတွေနဲ့ တိုင်ပြောမှာနော်.. “ ဆိုတော့ သူအသံတိတ်သွားတယ်။ သူ့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းလေးငုံ့ပြီး သက်ပြင်းချနေလေရဲ့။ မရှေးမနှောင်းဘဲ ဆရာနဲ့ အခြားသူတွေ ရောက်လာတာနဲ့ စကားစပြတ်သွားတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒိနေ့ည က ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်တောင် သေသေချာချာ ကြည့်ဖူးတာမဟုတ်။ သူကိုပဲ ကြိမ်ဆဲ နေမိတယ်။
နောက် တစ်ပတ် သင်္ချာ အချိန်ပြီးလို့ ကျွန်မရေချိုးမလို့ ထတော့သူက ထပ်ပြောတယ်။
“ဟဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ… ဘာလို့ ကြည့်ချင်နေရတာလဲ” ဆိုတာ့ သူက “ငါမမြင်ဖူးလို့ဟ… ” တဲ့။ ရုပ်ကိုက သနားကမားနဲ့။
“နောက်နင်တို့နဲ့ တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး.. ရင်းရင်းနီးနီးဆိုလို့ နင်ပဲ ရှိလို့ပါဟာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ တဲ့..”။
“တော်ပြီဟာ ထပ်မပြောနဲ့” လို့ ပြောပြီး ထားခဲ့လိုက်တယ်။
“ဒီနေ့ နင်နဲ့ ငါ နောက်ဆုံးတွေ့ရမယ့် နေ့မို့ပါဟ ..” လို့ သူက နောက်ကနေ လှမ်းပြောတယ်။ သူ့ကို ဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ရေချိုးရင်းကျွန်မ ခေါင်းထဲ မျိုးစုံတွေးပေါ့။ တကယ်တော့ ကျူရှင်က ဒီနေ့ နောက်ဆုံးနေ့ပါ။ နောက်တစ်ပါတ်ဆို စာမေးပွဲကြီးစပြီလေ။ နောက် ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့ သံယောဇဉ်ကလည်းရှိတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကတော်ပြီဆိုရင် ရှေ့ဆက်မတိုးတဲ့ သူ့ကိုလည်း ယုံကြည်မိသလိုပဲ။
သူ့ကို ပြလိုက်တော့ရော ဘာဖြစ်မှာလဲ။ မပြလည်း ရတာပဲ။ ငါသိက္ခါများ ကျသွားမလား.. အစရှိသဖြင့် ပေါ့။ သူဟာ ရိုးရိုးသားသားပဲ သူမြင်ချင်တာကို ပြောတာ နေမယ်လို့ ကျွန်မ တွေးလိုက်မိတယ်။ တကယ်လို့ အခွင့်အရေးတ်စုံတစ်ရာ ယူချင်တယ် ဆိုရင် သူမှာ ယူနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိခဲ့တယ်လေ။ ခေါင်းထဲမှာ ပေါင်းစုံတွေး နေတာမို့ အဲ့ဒိနေ့က ရေချိုးချိန် နဲနဲ ကြာသွားတယ်။
အင်္ကျီဝတ်နေရင်း ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ချလိုက်တယ်။ အဝတ်အစားလဲပြီး အိမ်ရှေ့ကို ထွက်လာ တော့ သူက သင်္ချာတွက်နေတယ်။ ကျွန်မက တံခါးပေါက်ဆီသွားပြီး ဂျက်ချလိုက်တယ်။ ရင်က တဒိန်းဒိန်းခုန် နေသလိုပဲ။
ပြီးတော့ ဘေးက ဧည့်ကုလားထိုင်ပေါ် ခပ်မြန်မြန် ထိုင်လိုက်ပြီး “ဟဲ့.. နင်ကြည့်ချင်တယ်ဆို လာကြည့်။ နင့်လက်နဲ့တော့ မထိနဲ့.. “ လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဘောလ်ပင်ကို ပစ်ချပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို သူ ကျွန်မရှေ့ ရောက်လာတယ်။ သူ့မျက်နှာက ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီး စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့။
သူက ကျွန်မရှေ့မှာ ဒူးထောက်လျက်သားထိုင်နေတယ်။ ကျွန်မက ပေါင်ကို အသာကားပြီး ဂါဝန်စကို လှန်တင်လိုက်တယ်။ သူက ထူးခြားတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ အဲ့ဒိနေရာကို စူးစိုက်ပြီး ကြည့်နေတယ်။
“တွေ့ပြီလား” ဆိုတော့ သူက “နင်အမွှေးတွေ ပေါက်နေပြီနော်.. တဲ့”။
ပြီးတော့ “အပေါက်ကို မမြင်ရဘူးဟာ.. “ ဆိုပြီး အထွန့်တက်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ခါးကို နဲနဲ လျော့ထိုင်ပြီး လက်နဲ့ ဆီးပုံးမွေးခပ်ပါးပါးကို အသာရှင်းပြီး အသာဖြဲပြလိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် ဘယ်လို ပုံစံလဲဆိုတာ မြင်ရပါဘူး။
သူကတော့ ခေါ်တော တစ်သောင်းအား မျက်လုံးနဲ့ စိုက်ပြီး ကြည့်နေလေရဲ့။ ဒါနဲ့ “တော်ပြီဟာ.. ပြီးပြီ” ဆိုပြီး ခါဝန်ကိုပြန်ချပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ ရှက်တာကြောင့် ဖြစ်သလို တစ်စုံတစ်ယောက် ရောက်လာ မှာကို စိုးရိမ်တာလည်း တယ်လေ။ သူလည်း သူ့နေရာသူ သွားထိုင်နေလေရဲ့။
ကျွန်မရဲ့ ရင်ခုန်သံကို ကျွန်မ ပြန်ကြားနေရတယ်။ တံခါးချက်ကို သွားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ မရှေးမနှောင်းပဲ ကျောင်းလာတက်တဲ့ သူတွေ ရောက်လာကြပြီ။ တကယ်တော့ အဲ့ဒိနေ့ဟာ သူနဲ့ ကျွန်မ နောက်ဆုံး စကားပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေ့ပါပဲ။ နောင် ဆယ်နှစ်ကျော် ကြာသည်အထိ ပေါ့။
ပီပီသသကြီး ထွက်လာတဲ့ သူ့ရဲ့စကား။ သူအဲ့ဒိလို ပြောလိမ့်မယ်မှန်း မထင်ထားခဲ့မိဘူး။ ရုတ်တရက်တော့ ကျွန်မ စကားပြန်ပြောစရာ ပျောက်သွားတယ်။ ကျွန်မရင်ထဲ ပူသွားတယ်။ တဒိတ်ဒိတ် ခုန်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နှလုံးခုန်သံကို ကိုယ်ပြန်ကြား နေရတယ်။
ရုတ်တရက် ပြန်ပြောစရာ စကားစ ရှာမရ သလို ချက်ချင်းပဲ ဒီနေရာက ထထွက်သွားမလား၊ ဆက်နေရမလား၊ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ဝေခွဲမရဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဖန်ခွဲထဲက ဝိုင်ကို မွေ့ရင်း တစ်ကြိုက်လောက် ထပ်သောက်လိုက်တယ်။ ပါးစပ်ထဲ နွေးသွားပြီး ပူဆင်းသွားတဲ့ ဝိုင်အရသာက ကျွန်မကို နေသာ ထိုင်သာ ရှိသွားစေပါတယ်။ ရုတ်တရက် သူက ကျန်မလက်မောင်းကို အသာ အယာ လာကိုင်တယ်။
နှစ်ယောက်သား တိတ်တဆိတ် ထိုင်နေကြတာ အတော်ကြာမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မခေါင်းထဲမှာ အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်သလို သူ့ခေါင်းထဲမှာလည်း အလုပ်ရှုပ်နေမှာပါ။ နောက်ဆုံးတော့ အသက်ကို ဝအောင် ရှူသွင်းလိုက်ပြီး လက်ကျန်ဝိုင်ကို မော့ သောက်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ “ငါပြန်တော့မယ်ဟာ..” လို့ ခပတ်တိုတိုပဲ ပြောဆိုပြီး ထလိုက်တယ်။ သူကလည်း “ငါလိုက်ပို့မယ်” ဆိုပြီး သတိပြန်ဝင်လာတဲ့ ဟန်နဲ့ ထလာတယ်။
ရုန်းကန်ပြီး သူ့ဘက်ကို လှည့်လိုက်တယ်။ သူ့လက်တွေက ပြေလျော့သွားပေမယ့် ကျွန်မ လက် မောင်းတွေကို ခပ်ဖွဖွ ကိုင်ထားဆဲပဲ။ သူ့မျက်နှာကို မကြည့် ရဲဘူး။မျက်စေ့အောက်မှာ သူ့ရင်ဘတ်ကိုပဲ မြင်နေရတယ်။
“သိင်္ဂီ သိသွားရင် မကောင်းဘူး ဟာ…. “ လို့ ထပ် ပြောလိုက်တယ်။
သူက “ မသိအောင် နေမယ်လေဟာ” “နင်နဲ့ ငါနဲ့ပဲ” တဲ့။ ကမူးရှူးတိုး ထွက်လာတဲ့ လေသံ။
မာန်နတ်က ကျွန်မစိတ်ကို ကြီးစိုးသွားပါပြီ။ ကျွန်မတို့ နှစ်ဦးတည်း ဆိုတဲ့ အသိ အပြင် ဘယ်သူမှ မသိအောင် ထိန်းသိမ်းထားရင် ရတာပဲ ဆိုတဲ့ အသိက တွန်းအားပေးလိုက်သလိုပဲ။ ကျွန်မ သူ့ကို မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ သူ့မျက်ဝန်းထဲမှာ မြင်ရတာ က ရမက် ။ ကျွန်မ ရဲ့ မောင် ခရီးသွားပြီး ပြန်လာတိုင်း တွေ့ရတဲ့ အရိပ်အငွေ့။
သူလိုချင်တာ ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်။ အချစ်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မလိုချင်တာလည်း သူ့ရဲ့ တစ်ခဏတာ အယုအယမှု့ ။ အပေး နဲ့ အယူပဲ လို့ စိတ်ထဲ မှာ ပေါ်လာတဲ့ အတွေးက စိတ်ဆန္ဒကို ရှေ့တစ်လှမ်းချင်း တိုးလာစေပါတယ်။ ထိတွေ့ မိနေတဲ့ အထိအတွေ့ကို မရှောင်ချင်တော့ဘူး။ ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ် မှာ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ အသိက ခေါင်းထဲမှာကြီးစိုးနေတယ်။
သူ့ကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး မေးလိုက်တယ်။ “နင် အရမ်းလုပ်ချင် နေလား..” လို့။ သူက မဆိုင်းမတွဘဲ “အေး” ဆိုပြီး ရှိုက်သံကြီးနဲ့ ပြန်ဖြေတယ်။
“ဒါဆို သိင်္ဂီ မသိစေနဲ့ … ဒီတစ်ခေါက်ပဲ.. ငါ နင့် မယားငယ် မဟုတ်ဘူး.. ” လို့ကျွန်မပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်မ အသံက တုန်ရီ နေပါတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို ကျွန်မကိုဆွဲဖက်လိုက်ပြီး သူ့လက်တွေက ဝတ်ထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဂါဝန်ကို ဆွဲမတယ်။ ကျွန်မနောက်ပိုင်း တစ်စိတ်တစ်နေရာဟာ ဟာလာဟင်းလင်းလို ဖြစ်သွားတယ်။
ခါးထိ လိပ်တက်သွားတဲ့ ဂါဝန်အောက် လှမ်းလျှိုပြီး တင်ပါးတွေကို လှမ်းကိုင်တယ်။ ခါး အသားကို ဖက်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ကျွန်မရုန်းလိုက်ပြီး “ နင် သန့်ရှင်းရေးလုပ် အုံးဟ ဒီအတိုင်းတော့ မလုပ်ချင်ဘူး” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ကျွန်မအသံက ခပ်ညုညု ဖြစ်နေသလိုပါပဲ။ သူက ချက်ချင်းပဲ ကျွန်မလက်ကို ဆွဲပြီးအခန်းထဲကို ခေါ်သွားတယ်။ ကျွန်မ လက်ထဲက ကျောပိုးအိတ်က ကြမ်းပေါ်ကို ဘုတ်ခနဲ ပြုတ်ကျ ကျန်ခဲ့တယ်။
ရေချိုးခန်းထဲက ရေတဖွဲဖွဲ ကျသံကို ကြားနေရတယ်။ တံခါးကို ပိတ်မထားတော့ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့ သူကျောပြင်ကို နဲနဲ ပါးပါး မြင်နေရတယ်။ ဝတ်ထားတဲ့ ဂါဝန် အင်္ကျီကို အသာချွတ် ခေါက်ပြီး စာဖတ် စားပွဲပေါ်မှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် တင်ထားလိုက်တယ်။
ရုတ်တရက် လိုအပ်ရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကောက်ယူပြီး ပြန်ဝတ်နိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့သတိက ရှိနေတုန်းပါ။ အဝတ်အစားချွတ် ပြီးတဲ့အချိန် ရေကျသံတိတ်သွားပြီး သူအပြင်ထွက်လာတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ အခုကျွန်မကိုယ်ပေါ်မှာ ဘရာနဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပါးပါးပဲ ရှိတော့တယ်။ သူ့ကို ကျွန်မလှည့်မကြည့်ရဲဘူး။
ဘရာ ကိုချွတ်ပြီး စားပွဲပေါ်တင်ပြီးမှ အသက်ကို ဝအောင်ရှူသွင်းလိုက်ပြီးမှ သူ့ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ တဘက်ဖြူကြီးနဲ့ ရေသုတ်နေတဲ့ သူ့ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့တဘက်ကို ကြမ်းပေါ်လွှတ်ချလိုက်တယ်။ ဂျင်ကစား ထားတဲ့ အတွက် သူ့ကိုယ် ခန္ဓာက အချိးကျကျ တောင့်တောင့်တင်းတင်း ပါ။
ပြီးတော့ တပိုင်းတစ တောင့်တင်းပြီး တွဲလောင်းကျနေတဲ့ သူ့ရဲ့ နိမိတ်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြည့်မိတာ ခဏလောက် ကြာသွားတယ်ထင်ပါရဲ့။ သူက ကျွန်မဆီ ခတ်သွက်သွက်လျောက်လာပြီး။
“နင့်ကို ငါ အားမနာ တော့ဘူးနော်” လို့ ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မလက်မောင်းတွေကို ဖမ်းကိုင်ပြီး ကုတင်ပေါ် တွန်းလှဲလိုက်ပါတယ်။
နောက် ကျွန်မခြေထောက်ကို မပြီး အတွင်းခံကို ခပ်သွက်သွက်ပဲ ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒိအတွင်းခံကို သူ့မျက်နှာပေါ် အုပ်နမ်းပြီး ကျွန်မ ဘေး ကို ပစ်ချလိုက်တယ်။ ဇာနားတပ်ထားတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဖြူဖြူ လေးဟာ ကျွန်မ မျက်နှာဘေးမှာ ပုံခနဲ ကျလာတယ်။
အတွေ့အကြုံရှိထားသူမို့ ပေါင်ကို အသာကားပြီး ခြေထောက်တွေကိုကွေးထား ပေးလိုက်မိပါတယ်။ ဘေး က ခေါင်းအုံးကို ယူပြီး ခေါင်းအောက် ထိုးထည့်ပြီး အုံးလိုက်တယ်။ အရာရာ ဟာ အလိုလို လုပ်မိလိုက်တာပါပဲ။ သူက ကုတင်ပေါ်တက်လာပြီး ကျွန်မ ပေါင်ရင်းကို ဖြဲလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ စိုက်ပြီးကြည့်နေတယ်။ ကျွန်မဟာ က စိုစွတ်နေပြီ ဆိုတာကို သိတယ်လေ။ သူက ဆီးစပ်ကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်ပြီး စိုစွတ်နေတဲ့ ကျွန်မဟာရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ စုန်ဆန် ပွတ်တယ်။ ဆီးပုံးမွှေး ကိုချန်ပြီး နှုတ်ခမ်းဘေးသားတွေကိုပဲ ဖယောင်းကပ်ထားခဲ့တဲ့ အတွက် ကျွန်မဟာ က အမွှေးအမျှင်ကင်းပြီး ပြောင်ချော နေပါတယ်။
သူ့ လက်မ နဲ့ အစေ့နေရာကို ပွတ်သပ်တဲ့အခါ ကျွန်မရင်ထဲ လှိုက်ဖိုလာပါတော့တယ်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက် အဖို့ အဲ့ဒိလို အလုပ်ခံရရင် ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ သူထိတွေ့လိုက်တိုင်း မျက်စေ့ကို မှိတ်လိုက်မိတယ်။ သာယာမှုရဲ့ နိဒါန်း နဲ့ အတူ သွေးသားဆန္ဒကလည်း တက်ကြွလာပါတယ်။ သူ့လက်ကို ဆွဲပြီး ရင်သားတွေကို ပွတ်သပ် ဖိညှစ်လိုက်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဝမ်းဗိုက်သားကလှိုက်ခနဲ လှိုက်ခနဲ။
သူနမ်းပုံကတစ်မျိုး။ မျက့်စေ့တွေကို မှိတ်ထားပြီး သူ့မျက်နှာနဲ့ ကျွန်မ ဟာ ကို ပွတ်တာပါပဲ။ နှာခေါင်းနဲ့ ရွတ်ခနဲ မည်အောင် နမ်းတယ် ပါးတွေ နဲ့ ပွတ်တယ်။ မေးနဲ့ ပွတ်တယ်။ နှာဖူးနဲ့ ပွတ်တယ်။ ကျွန်မ ဘာလုပ်မိသလဲ သိလား။ ကော့ပေးမိပြီး သူ့မျက်နှာနဲ့ ပြန်ပြန်ပြီး ပွတ်လိုက်မိတယ်။
ရိုင်းသွားသလို ပဲလားလို့ တွေးမိပေမယ့် ထိန်းချုပ်လို့ မရလောက်အောင်ပါပဲ။ သူနှမ်းရှုံနေတာကို ပီပီသသ မမြင်ရပေးမယ့် တစ်ချက်ခတစ်ချက် သူ့နှာခေါင်းနဲ့ ကျွန်မ အတွင်းသားကို တွန်းတွန်းပြီးတိုး တာကို ခံစားနေရတယ်။ ပြီးတော့ ပါးစပ်နဲ့ ကျွန်မဟာ တစ်ခုလုံးကို အုပ်ပလိုက်တာပဲ။
သူ့ကိုကျွန်မ ကြည့်မနေတော့ပါဘူး။ မျက်စေ့ပြန်မှိတ်ပြီး အထိတွေ့ကိုပဲ အာရုံထားလိုက် တော့တယ်။ ပူနွေးစွတ်စိုတဲ့ နူးညံ့တဲ့ အရာတစ်ခုက ကျွန်မ “ဟာ” တစ်ခုလုံးကို အုပ်စွပ်ထားသလိုပဲ။ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ အတွင်းသားကို ထိအောင်ပွတ်သတ် ထိုးစွနေတဲ့ သူရဲ့ လျှာကြမ်းကြမ်း။
ကျွန်မ စိတ်ရိုင်းတွေ ပေါက်ကွဲ ထွက်သွားပါပြီ။ ဟစ်အော်ပြီး ညည်းလိုက်မိတယ်။ သူတစ်ချက်တစ်ချက်ငုံစုပ် လိုက်တိုင်း တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါ သွားပါတယ်။ လူလည်း မောဟိုက်လာပါတယ်။ ရပ်စေချင်သလားဆို တော့ သူ့ကို ဆက်ခါဆက်ခါ လုပ်စေချင်တာပါပဲ။
အတော်ကြာတော့ သူကရပ်လိုက်ပြီး အပ်ါပိုင်းကိုတက်လာတယ်။ ထောင်မတ်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ငုံပြီး စို့ပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ကျွန်မ ပါးတွေကိုလာနမ်းတယ်။ ကျွန်မ “ဟာ” ရဲ့ အနံ့ကို ကျွန်မ ပြန်ရလိုက်တယ်။ သူ့ နှာမှုတ်လိုက်တဲ့လေက ကျွန်မမျက်နှာကိုလာထိနေတယ်။
အနမ်းတွေရပ်သွားလို့ မျက်စေ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူကလည်းကျွန်မကို ပြန်စိုက်ကြည့်နေတယ်။ သူ့မျက်နှာကို လက်နဲ့ ကိုင်ပြီးပွတ်သပ်လိုက်မိတယ်။ ငတ်ပြတ်နေသလိုပဲ။
ဒါနဲ့ “နင် အရမ်းငတ် နေသလား” လို့ မေးလိုက်တယ်။ ကျွန်မ အသံက ခပ်ညုညု ဖြစ်နေသလိုပါပဲ။
သူကလည်း “အေး” ဆိုပြီးပြန်ဖြေတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ စကားသံတွေက မောဟိုက်နေတယ်။
သူ့တံတွေးတွေနဲ့ စိုစွတ်ချောမွေ့နေတဲ့ ကျွန်မ ဟာ အထဲကို ရုတ်တရက် တိုးဝင်လာတဲ့ အချိန်မှာ ရလိုက်တဲ့ ခံစားမှု့က အရာရာကိုလွတ်ထွက် သွားစေပါတယ်။ မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ထားလိုက်မိသလို ညည်းညူ အော်ဟစ်သံပင် ထွက်သွားမိတယ်။ ဆီးစပ်နှစ်ခု တစ်ခဏလောက် ထိထားပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ သူက အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ပါတော့တယ်။
နှစ်နဲ့ ချီပြီး မရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ နူးညံ့တဲ့ ပွတ်တိုက် မှု့တွေဟာ ကျွန်မကို မိန်းမော သွားစေခဲ့ပါတယ်။ အဖန်ဖန် ပွတ်တိုက်တဲ့ အရှိန်ဟာ တိုးမြင့်လာပြီးတဲ့ နောက် ရုတ်တရက်ရပ်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ လစ်ဟာ သလိုဖြစ်သွားလို့ မျက်စေ့ဖွင့် ကြည့်လိုက်တော့ သူက ဒူးထောက်ပြီး ရပ်မိုးနေတယ်။ တောင့်တင်းပြီးခါရမ်းနေတဲ့ သူ့ဟာကို အိပ်ယာဖုံးဖြူဖြူနဲ့ ဆွဲသုတ်လိုက်ပြီး ကျွန်မ ဗိုက်ပေါ်က ကွန်ဒွန်အိပ်ကို လှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် မောင့် ရဲ့ အပြုအမူကို အမှတ်ရလိုက်မိတယ်။ သားသမီးမလိုချင်တဲ့ အခါ ကျွန်မတို့က ကွန်ဒွန်သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မောင် က အလွှာခြားတာ မကိုက်ဘူးတဲ့လေ။ သူစိတ်ကျေနပ်ခါနီးအထိ သဘာဝအတိုင်းပဲ။ ပြီးခါနီးပြီဆိုမှ သူက ကွန်ဒွန်ကိုစွပ်တယ်။ ဒါဟာ ကျွန်မအတွက် တော့ စိတ်ကို နှစ်ထားလိုက် တော့ ဆိုတဲ့ အမှတ်သင်္ကေတပါပဲ။
သူက ကျွန်မအထဲ ပြန်ထိုးထည့်လိုက်ပြီး ကျွန်မအပေါ် မှောက်လျက် မိုးလိုက်တယ်။ ကျွန်မလည်တိုင် နဲ့ ပါးတွေကို ရွှတ်ခနဲ နမ်းလိုက်ပြီး ပြောတယ်။
“ကောင်းလား.. “ တဲ့။ ယောက်ျားတွေဟာ ဒီစကားကို အမြဲမေးတတ်ကြတယ် ထင်ပါရဲ။
မင်္ဂလာဦးညမှာ စကားကို ပထမဆုံးဒီ စကြားဖူးတဲ့ အချိန်က ကျွန်မမျက်လုံးတွေကို မှိတ်ပြီး တုံဏှိဘာဝေ နေခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ အလျင်းသင့်သလို ပြန်ပြောမိတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ရလာတော့လည်း စိတ်ထဲရှိတဲ့ အမှန်အတိုင်းပြန်ပြော တတ်သွားတာပါပဲ။
“… ကောင်းတယ်.. “ လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ “နင် အရမ်းငတ် နေသလား.. “ လို့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ထပ်မေးလိုက်တယ်။ ဒီစကားကို ဘာ့ကြောင့် ကျွန်မ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောမိမှန်း မသိဘူး။ အခြားပြောချင်စရာ စကားလည်း မရှိဘူး။ သူက ကျွန်မကို စူးစိုက်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မဘေးက နားကို နမ်းပြီး ကပ်ပြောတယ်။
“နင့်ကို – ချင်နေတာ .. နင့်ဟာကို စမြင်ကတည်း က.. သိလား “ တဲ့။
ပြီးတော့ သူ့ဟာကို ဆွဲထုတ်ပြီး ဆောင့်ခနဲ ပြန်ထည့်ပါတယ်။ သူ့ပေါင်ရင်း နှစ်ခု ခတ် သံက ဖေါင်းခနဲထွက်လာတယ်။ ကျွန်မပါးစပ်က “အ” ခနဲအသံထွက်သွားတယ်။ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ပွတ်တိုက်မှု့ဟာ အထွဋ်ထိပ် အရသာကို ပေးလိုက်တာပါပဲ။
“နင့် – က – လို့ အရမ်း ကောင်းတယ် .. “ ဆိုပြီး ထပ်ပြောတယ်..။ ထပ်ဆောင့်တယ်။ ဖေါင်းခနဲ မည်သံနဲ့ အတူ စွတ်ခနဲ ဝင်လာတဲ့ အထိအတွေ့ဟာ ကျွန်မကို စွံ့အ နေစေပါတယ်။ ကျွန်မဘာမှပြန်မပြော တော့ဘဲ သာယာမှု့ကိုပဲ အာရုံစိုက် နေလိုက်ပါတော့တယ်။
နောက် “နင့်ကို တစ်ဆုံး… မယ်” တဲ့.. ။ .. အဲ့ဒိ တစ်ခွန်းပြောလိုက် ပြီးတော့ ဆောင့်ချက်တွေဟာ မြန်ဆန်ပြီး ပြင်းထန်လာပါတယ်။ တဖေါင်းဖေါင်း မည်နေတဲ့ အသံ၊ သူ့ရဲ့ အားပြုသံ၊ သူ့ပါးစပ်က ပြောနေတဲ့ အယုတ္တအနတ္တ တွေနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ညည်းသူသံ တွေက နားထဲ ဝင်တလှည့် မဝင်တလှည့်ပါပဲ။ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက် သည့်တိုင် သူခရီးနှင်ပြီဆိုတာ အတွေ့အကြုံအရ သိနေတဲ့ အတွက် ကျွန်မလည်း စိတ်ကိုလွှတ်ထား လိုက်ပါတော့တယ်။
အတန်ကြာတော့ သူ့က အော်ဟစ် ပြီး သူ့တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားပါတယ်။ ကျွန်မအထဲကို သူဟာကို အတင်းဖိသိပ်ထည့်ထား ပြီးတော့ပေါ့။ ကျွန်မလည်း အော်လိုက်မိတယ် ထင်ပါတယ်။ အတွင်းမှာ ပြည့်ကျပ်ပြီး နေရာယူထားတဲ့ သူ့ဟာနဲ့ အတူ ဖျစ်ခနဲ ဖျစ်ခနဲ နဲ့ စီးဆင်းလာတဲ့ ခံစားမှု့ကို ခံစား နေရတယ်။
တင်ပါးအောက်မှာ ခံထားတဲ့ခေါင်းအုံးကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ညှစ်ကိုင်ထားရင်း သူ့ဟာကိုလည်း ဆက်ခါဆက်ခါ ညှစ် နေလိုက်မိတယ်။ တ “အင်း…” အင်း.. နဲ့ အသံထွက်မိသည်ပါပဲ။ သည့်နောက်မှာတော့ အိပ်ခန်း တစ်ခန်းလုံးကို လူသား နှစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းပဲ မင်းမူနေပါတော့တယ်။
အချိန် ဘယ်လောက် ကြာကြာ အထိ မောဟိုက် မိန်းမောသွားမိမှန်း မမှတ် မိတော့ဘူး။ အမောပြေလို့ မျက်စေ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မကိုယ်ပေါ်မှာ အိပ်ယာခင်းဖြူ တစ်ခုက တစ်ပိုင်းတစ်စ ရောက်နေတယ်။ ဘေးကိုလှည့်ကြီးလိုက်တော့ သူက ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ပက်လက်ကြီး မှိန်းနေတာကို တွေ့လိုက်တယ်။
သူ့ရင်ဘတ်ကြီးက နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက်နဲ့ ရှိနေတုန်းပဲ။ သူ့ဟာ ကြီးကတော့ ပျော့ခွေနေပါပြီ။ ပြန်သင့်ပြီဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ကုတင်ပေါ်က နေအသာထလိုက်တယ်။ တုပ်ချည်ထားပြီး သုတ်ရည်ဖြူဖြူတွေ ပြည့်နေတဲ့ ကွန်ဒုံးက ကြမ်းပေါ်မှာ ။ အိမ်ထောင်သည် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မအတွက် သူ့သုတ်ရည်ပမာဏ မနည်းဘူးဆိုတာ ရယ် ခဲပြစ်နေတဲ့ အတွက် အတော်ကြာပြီဆိုတာရယ်ကို အတတ်သိလိုက်တယ်။
ရေချိုးခန်းထဲ ခပ်သွက်သွက် ဝင်လိုက်ပြီး အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ရေလောင်းချလိုက်တယ်။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး သူ့ဟာ အကျွင်းအကျန်တွေများ ကျန်အုံးလိမ့်မလားဆိုပြီး ညှစ်ချကြည်လိုက်ပေမယ့် ဘာမှ ထွက်မလာဘူး။ ကွန်ဒုံးသုံးခိုင်းမိလို့ တော်ပါသေးရဲ့ လို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တွေးလိုက်မိတယ်။ ပြန်ထ လိုက်တော့ ပေါင်တွင်းသားတွေက တော့ ကြိမ်းနေတယ်။
စိတ်ထဲက “စောက်ကောင်” လို့ ကြိမ်ဆဲလိုက်မိတယ်။ ရုတ်တရက် မောင့်ကို သတိရလိုက်မိတယ်။
“ချစ် အတွက် အပြည့်စု ထားတယ်” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အတူ မောင့်ရဲ့ ပထမဆုံးသော အချစ် ကြမ်းကြမ်းတွေက ကျွန်မကို တုန်လှုပ်ခဲ့ စေဖူးပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မုဒိမ်း အကျင့်ခံနေရသလားလို့ ထင်ရလောက်အောင် မောင့်ရဲ့ ကြမ်းတမ်းမှု့တွေ၊ ရှုပ်ပွ လွတ်လပ် တဲ့ ဟိုတယ်အခန်း၊ နာကျင်မှု့ ရောယှက်နေတဲ့ သာယာမှုမိန်းမောမှု့ တွေ၊ လမ်းလျောက်ရ ခက်လောက်အောင် ကြိမ်းစပ်နေတဲ့ စေးကပ်ကပ် ပေါင်တွင်းသားတွေ၊ နောက်နေ့ မနက် အိပ်ယောထ တဲ့ အခါ ကျွန်မ ဟာ ထဲက ပြန်ထွက်ကျလာတဲ့ မောင့် ရဲ့ ခဲပြစ်နေတဲ့ ဟာတွေ နဲ့ ညှီစို့စို့ အနံ့ပြင်းပြင်း တွေ ဟာ တစ်သက်စာ အမှတ်ရစရာ ပြားရည်ဆမ်း နေ့ရက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
“ဟဲ့ လက်စလက်နတွေ ရှင်းလိုက်အုံး” လို့ ပြောလိုက်ပြီး စားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ အဝတ်အစား တွေကိုယူလိုက်တယ်။ သူ့ကို ကျောပေးရင်း အရင်ဆုံးဝတ်မိတာတာ ဘရာစီယာပါ။ ကျွန်မနောက်ကျောကို သူကြည့်နေတယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။
အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို ဝတ်ပြီးတော့ သားရေကြိုးကို အသာဆွဲပြီး ဖတ်ခနဲမည်အောင် ပြန်လွှတ်လိုက်မိတယ်။ ဂါဝန် အင်္ကျီကို စွပ်ဝတ်လိုက်ပြီး မှန်တင်ခုံဘက်ကူးကာ ခေါင်းဖြီးပြီး အလှအနည်းငယ် ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအချိန်အထိ သူက ကုတင်ပေါ်မှာ ပဲ ထိုင်ပြီး ကျွန်မလုပ်သမျှကို အရသာခံကြည့်နေတုန်းပဲ ဆိုတာကို သိနေတယ်။
တကယ်တော့ သူ့ကို ကျွန်မ မြူဆွယ်မိမှန်းမသိ မြူဆွယ်နေလိုက် မိတယ် ဆိုတာကို ကျွန်မ ဝန်ခံရမှာပါပဲ။ ကျောပေးထား ပေမယ့် သူစိတ် ထ နေတုန်းပဲ ဆိုတာကို သိနေတဲ့ အတွက် နောက်ကနေများ ငါ့ကို ဆွဲဖက်လိုက်လေ မလား ရယ်လို့ တွေးမိပါ သေးတယ်။ သူက ဘာမှ မလှုပ်ရှားခဲ့ပါဘူး။ သူက လှုပ်ရှားခဲ့ လျှင်လည်း …
“ငါပြန်တော့မယ်” လို့ ပြောလိုက်တော့ သူကလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး အဝတ်အစား ထဝတ်တယ်။ ကျွန်မလည်း ဧည့်ခန်းထဲ ထွက်ပြီး သူ့ကို ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ်။ သူထွက်လာတော့ နှစ်ယောက်သား အပြင်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ စင်္ကြန်လမ်းတစ်လျောက် သူ ကျွန်မနောက်က တိတ်တဆိတ်လိုက်လာခဲ့တယ်။
တင်ပါးအတွင်းသား တွေဟာ ကြိမ်းနေတဲ့ အတွက် လမ်းကို ပုံစံမပျက်အောင် သတိထားလျောက် နေရပါတယ်။ ဓါတ်လှေခါးထဲ ကထွက်လို့ အပြင်တံခါးဝရောက်သည်အထိ စကားတစ်ခွန်းမှ မပြော မိကြသလို မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင် မကြည့်ဖြစ်ကြဘူး။ တံခါး ဖွင့်ပေးတဲ့ အခါကျမှ သူက ကျွန်မကို ကြည့်ပြီး ပြောတယ်။
“ငါ.. နင့်အိမ် အထိ ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ….“ တဲ့။ ကျွန်မ ဒိထက်ပိုပြီး မပတ်သက်ချင်တာတော့ အမှန်ပါ။
“မပို့နဲ့ ရတယ်၊ ဘစ်စကားနဲ့ ဆို လေးဆယ့်ငါးမိနစ်ပဲ.. “ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ တစ်ခဏတာ မျက်လုံးချင်း စုံမိလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်မ သတိပြုလိုက်မိတာက သူ့မျက်ဝန်း ထဲက တောင့်တမှု့တွေပါ။ နောက်ပြန်မကြည့်တော့ဘဲ ဘစ်စကားဂိတ်ဘက် ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ကားကလည်း အခန့်သင့်ရောက်လာတာနဲ့ မီအောင် ပြေးတက်ပြီး ရတဲ့ နေရာထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကားက အတော်ချောင်ပါတယ်။
မှန်ပြတင်းကနေ တရိပ်ရိပ် ပြေးလွှားနေတဲ့ အိမ်တွေနဲ့ သစ်ပင်တွေကို ငေးကြည့်ရင်း ခံစားမှု့ ပေါင်းစုံကို ခံစားနေရပါတယ်။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု့ ကိုလည်းခံစားရသလို ကျေနပ် နှစ်သိမ့်မှု့ကိုလည်း ခံစားရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်သား တစ်ယောက်လို လည်း ခံစားမိသလို လွတ်လပ် မှု့ကိုလည်းခံစားနေရတယ်။
သိင်္ဂိ့ ကိုလည်း အရမ်းပဲ အားနာမိတယ်။ ကျွန်မ သစ္စာပျက်မိပြီလား။ သူတို့ တတွေ အဆင်ပြေကြ ပါစေ လို့ တိတ်တစိတ် ဆုတောင်းလိုက်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ တစ်ခဏ တာ အချိန်အတွင်းမှာ ဘယ်လိုမှ မမြော်မှန်းထားတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်လိုက်မိ တာကို ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မအံ့ဩ မိတာပါပဲ။
ဆောင့်စည်းမှု့တွေ သစ္စာတရားတွေ နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခါ တွေ ဟာ အချိန်တိုတွင်း ကြေမွ ပျောက်ပျက် သွားခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် နောင်တ ဆိုတာမျိုး မဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် နောင်မှာ သူ့ကို ရှောင်ရ တော့မယ် ဆိုတာကိုတော့ ကောင်းကောင်း နားလည် ထားပါတယ်။
ပန်ချင်တယ် ခရေဖူးဆိုလို့👈 (စ/ဆုံး)